Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Lungiselela imigca xa ubhabha usuka eLondon Heathrow
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
U-Heathrow mayhem: Izihlwele ezikhulu zigqithisile kwinqwelomoya yabasebenzi
Abanye abakhweli baseHeathrow babenika ingxelo yomgceni wamaxesha ngenxa yokunqongophala kwabasebenzi beBorder Force abagcina abahambi belinde imigca iiyure ezintlanu.
Ukunqongophala kwabasebenzi kukhokelela kwimigca emikhulu eHeathrow.
Abahambi banyanzelwa ukuba balinde kwimigca iiyure ezintlanu.
Imigca epakishwe yabeka umngcipheko we-COVID-19 kumawakawaka abakhweli beenqwelomoya.
Ukunqongophala kwabasebenzi kwiBorder Force kwisikhululo senqwelomoya saseHeathrow eLondon kukhokelele kwimigca emikhulu kunye nokusilela ngokupheleleyo kokungahambelani kwezentlalo kule veki, njengoko inani elilinganiselweyo labasebenzi belingakwazi ukumelana nabo bakumda.
Abakhweli beenqwelo moya e Isikhululo senqwelomoya saseHeathrow Ndikhe ndanamava aphindaphindeneyo ukusukela oko kwaqala ubhubhane we-COVID-19, kodwa ngolwe-Sihlanu, abanye abantu baseBritane bebexela amaxesha emgceni ngenxa yokunqongophala kwabasebenzi beBorder Force abagcina abahambi belinde imigca iiyure ezintlanu.
Omnye umkhweli ude waquleka ngexesha lesiphithiphithi.
Isikhululo senqwelomoya saseHeathrow siphendule kwizikhalazo ngokubanga ukuba ulibaziseko belubangelwa Umda weBorder ukuqhuba "Ukujonga ukulinganiswa kwezeMpilo ukuqinisekisa ukuthotyelwa kwabakhweli kwiimfuno zokungena kuRhulumente wase-UK."
Isikhululo seenqwelomoya asikhange sijongane nokusilela kokuphambuka ekuhlaleni kunye nokufika imigca emide, nangona kunjalo, eyabeka umngcipheko we-coronavirus kumawakawaka abakhweli beenqwelomoya.
NgoMgqibelo kusasa, abahambi kwiTheminali 5 baxele kwimidiya yoluntu ukuba imigca isweleke.
Ngokwamajelo eendaba asekuhlaleni, ubuncinci ezinye izehlo ezisibhozo zemigca emide, izihlwele ezixineneyo, kunye nokungabikho kokufikelela emanzini nakwizindlu zangasese kubhalwe phakathi kuka-Meyi noSeptemba.
NgoDisemba 2020-kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kweKrisimesi-amakhulu abakhweli ashiyekileyo Ujijekile kwisikhululo senqwelomoya saseHeathrow njengoko iinqwelomoya zaye zangxangxathwa ziiBrits zizama ukubaleka izithintelo zeCoronavirus ezisandula ukubhengezwa kutshanje, ezanyanzelisa iintsapho ukuba zihlale ekhaya kwaye zikude nabantu ababathandayo ngexesha leholide.
Uvavanyo olutsha olunzima kwisikhululo senqwelomoya sasePrague ...